Nwunye Androsterone na-acha uhie uhie (53-41-8) hplc ma98% | AAraw steroid ntụ ntụ
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Androsterone ntụ ntụ
Rating: SKU: 53-41-8. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike sitere na gram ka usoro nchịkwa nke Androsterone ntụ (53-41-8), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Androsterone ntụ ntụ bụ steroid androgenic nke na-eme n'ọtụtụ ebe, karịsịa na ụmụ anụmanụ, kamakwa n'ọtụtụ osisi, gụnyere osisi pine na ọka mushrooms. Ọ bụ ihe na-aga n'ihu iji testosterone, ma site n'onwe ya, ọ dị ntakịrị ike karịa testosterone na ọbara. N'ihi ya, Androsterone abaara ndị bodybuilders uru karị mgbe e tinyere ha na nchịkọta ndị ọzọ na-eme ka steroid ndị ọzọ na-etrogenic-anabolic.
Androsterone ntụ ntụ video
Raw Androsterone ntụ ntụ isi agwa
aha: Androsterone ntụ ntụ
Usoro Molecular: C19H30O2
Molekụla arọ: 290.44
Melt Point: 181-184 ° C
Raw Androsterone ntụ ntụ ojiji na steroids okirikiri
5α-androstan-3AL-ol-17-otu. Androsterone ntụ ntụ (CAS 53-41-8)
Raw Androsterone ntụ ntụ Usage
A pụrụ iwere eriri etrosterone transdermally site na patch ma ọ bụ ọnụ na capsule. Mgbe a na-agagharị na ya, Androsterone ntụ ntụ kwesịrị iji ọnụ kwuo na 400mg na 600mg kwa ụbọchị ma ọ bụ transdermally na 200mg na 300mg kwa ụbọchị. Mgbe ị na-akwakọba Androsterone ntụ ntụ, 200mg ga-ehichapụ doses ahụ na 400mg, dabere na ọnụ ọgụgụ nke steroid nọ na nchịkọta. Maka nke mbụ, a na-atụ aro ya ka ị nweta ọgwụ kachasị dị elu iji mee ka hormones na-arịwanye elu na ahụ. N'ụlọ nke abụọ maọbụ nke atọ, enwere ike ịgbatị dose ahụ maka ndị na-eme egwuregwu na ndidi maka steroid.
Ịdọ aka ná ntị na ntụpọ Androsterone nke ukwu (CAS 53-41-8)
N'ihi ọrụ a na-eme na androgenic nke onyinye a, ndị na-adịkarị nchacha nke nwoke kwesịrị izere onyinye a dịka ntutu isi dị nro na-etinye ndị nwere ike ịdaba n'ihe ize ndụ.
Androsterone raw ntụ ntụ bụ prohormone dịgasị iche iche nwere ọtụtụ uru iji ya eme ihe. Ejikọtara Androsterone raw ntụ ntụ na nsụgharị mbụ nke LG Sciences T-911 maka mgbatị mgbatị ahụ ọ na-enye, ma tinyekwara ya na obere usoro na LG-Sciences Formadrol Oke nke gara aga maka njirimara estrogen ya. Ka ọ dị ugbu a, epiAndrosterone raw ntụ ntụ na Androsterone raw ntụ ntụ dị na prohormone Epi-1 Test.
Esi zụta Androsterone ntụ ntụ (CAS 53-41-8) site na AASraw
Methenolone Acetate (Primobolan) ntụ ntụ
Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) ntụ (14605-22-2)